DAAWO : Madaxweynihii Hore Somaliya oo Hdal Ku Weeraray Mucaaradka Dowlada Farmaajo Hadana Shaaciyay.. | Allbanaadir News	DAAWO : Madaxweynihii Hore Somaliya oo Hdal Ku Weeraray Mucaaradka Dowlada Farmaajo Hadana Shaaciyay..
DAAWO : Madaxweynihii Hore Somaliya oo Hdal Ku Weeraray Mucaaradka Dowlada Farmaajo Hadana Shaaciyay..
Ayadoo mudooyinkii ugu danbeyse xaalad siyaasadeed oo aad u kacsan kajirtay magaalada muqdisho kasoo udhaxeyso mucaaradka dowlada iyo waliba dowlada soomaaliya ayaa siyaabo kala duwan waxa oga hadlay masuuliyiin hore iyo kuwa haatan dalka maamulka.
Madaxweynihii hore ee dalka soomaaliya haatan ah dibad joog ayaa arintaas oga hadlay tv-ga Universal waxaana oo sheegay in siyaasihiinta looga baahanyahay in dalka daacad u noqdaan iskana dayaan wax duminta.
Cabdiqaasim Salaad Xasan ayaa sheegay in looga fadhiyo mucaaradka dowlada haatan in noqdaan mucaarad dalka dhisaayo ay noqon mucaarad dalka duminaayo taasina aan lagu gaari karin hormar balaaran.
Madaxweynihii hore ayaa si dadban u weeraray shaqsiyaadka mucaaradka ah kuwaasi oo u badan beesha oo kasoo jeedo Habagidir waxaana usheegay in noqdaan mucaarad dalka dhiso ay noqon mucaarad dalka duminaayo looga fadhiyo in dalka isbadal kusameyaan.
Isku soo wada duub dowlada Maxamed Cabdullahi Farmaajo ayaa haatan la kulmeyso mucaaradyo aad u farabadan waxaana kadhashay olale xoogan mooshin loogu jiro.